သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): သူကြီးကိုကိုမောင်နှင့် မိန်းမများရခြင်းအကြောင်း
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 14:03
ကိုယ်တိုင်ဆွဲတဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံကလဲ မနည်းကို ကြည့်ယူရတယ်။ သနားစရာလေး။
ရေးထားတာ ရှည်လို့ ဖတ်ရမှာပျင်းတယ်။ ပျင်းပျင်းနဲ့ပဲ ဖတ်လိုက်ပါအုံးမယ်။
Friday, 10 December 2010 at 14:13:00 GMT
အကျနုပ်သည်ကား အင်ဂျင်နီယာတိုင်းပြည်မှ နှမကညာဖြစ်ပေသည်။
အကျနုပ်နေထိုင်ရာ အမိမြန်မာပြည်တက္ကသီလာတိုင်းပြည်တွင်လည်း ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့် ပုရိသတို့ပင်ကြီးဆိုးလေကုန်၏
ထို့အတူ ကျနုပ်တာဝန်ကျရာ ဆောက်လုပ်ရေးဌာနများတွင်လည်း ပုရိသတို့ပင်တည်း။
ထိုမှတဖန် ကျနုပ်သည် နိပွန်ပြည်သို့ရောက်ရှိပြန်ရာတွင်လည်း အကျနုပ်သည် ပုရိသတို့အလယ်တွင် နှမကညာတပါးဖြစ်ပြန်ပေတယ်။
အခုတခါ အလုပ်သစ်တွင်လည်း ပုရိသများသာဖြစ်ပေသောကြောင့် အကျနုပ်မှာ တဦးတည်းဖြစ်ပေပြန်တယ်။
သို့ပါသောကြောင့် အသင်တဂျီးသိစေရန်မှာ နေရာဒေသံသည်လည်း အရေးကြီးပါကြောင်း သတိလက်လွတ်မရှိစေချင်ကြောင်း လာရောက်ပြောကြားပါကြောင်း။
နှမတော် ဒကာမလေး မြတ်နိုး
Friday, 10 December 2010 at 14:17:00 GMT
အသင် တဂျီးမင်း မဖြေရှင်းနိုင်သော ပြဿနာမှာ အင်မတန်လွယ်ကူလှပါကြောင်း
ခွေးထီးဟူသမျှ ခွေးမဆိုးကဲ့သို့ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း...
Friday, 10 December 2010 at 14:19:00 GMT
ဖတ်ပီးသွားသည့် သကာလ အကျန်ပေးပါတော့မည်။
အကျန်မပေးခင် ဦးစွာပထမ ဝေဖန်ရသည်ရှိသော် ခေါင်းစဉ်နှင့် ပို့စ်၏ အဓိက ဆိုလိုရင်းမှာ လွဲချော်နေသလို ခံစားရပါသည်။ သဂျီး မိန်းမများရခြင်းအကြောင်းက အဓိကလား၊ ခွေးအကောင် ၅၀ ကိစ္စက အဓိကလား အဓိက နှစ်ခု ဒွိဟဖြစ်၍ နေပါသည်။
အဓိက ၂ခုကို ပေါင်းစု၍ လိုရာဆွဲတွေးရသည်ရှိသော် သဂျီးမိန်းမများရခြင်းမှာ တုံးဖလား၌ ခွေးပေါက်နှုန်းတိုးပွါးခြင်းကြောင့်ဟုသာ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် ကောက်ချက် ချလိုက်ပါသည်။
ခွေးပေါက်မ ကလေးများအား တနယ်တကြေးသွားပစ်စရာမလိုပါ။ တုံးဖလား လူဦးရေ ၂၅၅ ယောက်အား လူငါးယောက်လျှင် ခွေးတကောင်ကို တာဝန်ယူကြေး စနစ်ဖြင့် ခွဲတမ်းချပေးလိုက်ပါ။ ထိုခွေးမကလေးများနှင့်တကွ ရှိရှိသမျှ ခွေးမများအား သားမပွါးအောင် တိရစ္ဆာန် ဆရာဝန် အကူအညီဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါ။
(ဒါမှမဟုတ်လဲ သဂျီးကိုယ်တိုင် သားဆက်ခြားသင်တန်း သွားပေးပါ သူတို့လန်းဂွေခ်ျ့ တတ်ရင်ပေါ့ )
အဲ .. ကျန်သေးတယ်။
မိန်းမဦးရေက တက္ကသိုလ်တို့ တရားရိပ်သာတို့ လို ကောင်းရာကောင်းကြောင်းနေရာတွေမှာ မျာားသော်လည်း အရက်ဆိုင်၊ ဖဲဝိုင်း ဂျင်ဝိုင်း၊ တို့မှာ မဟာပုရိသ ဦးရေက ပိုများပါကြောင်း။ Pumpkin တတင်း နှမ်းတတင်း နှုန်းလောက်ကို ကွာသည် ဆိုသည့်အကြောင်းးးး ပြောရင်း နိဂုံးကမ္ပတ် အဆုံးသတ်လိုက်သည်။
Friday, 10 December 2010 at 14:31:00 GMT
ခွေးမတွေကို ဘာမှ လုပ်ဖို့လိုဘူး။ ခွေးထီးတွေကို ဟိုသင်းပြုလိုက်ရင်ပီးတာပဲ။
ခွေးထီးအကောင်ရေက နည်းတာပဲဆိုတော့ 3Es* နဲ့ အညီဖြစ်အောင် ခွေးထီးများကိုသာ ဟိုသင်းပြုစေ။ သဂျီးဝဋ်လိုက်ရင်တော့ တတ်နိုင်ဘူးးးးးးးးးးး။
မှတ်ချက်။ ကြုံတုန်း စာပါတခါထဲ နွှေးသွားပါသည်။
*3Es = economy, efficiency, effectiveness
Friday, 10 December 2010 at 14:41:00 GMT
ဪ...သဂျီး..သဂျီး...မိန်းမများတယ်ဆိုလို့...လက်စသတ်တော့ သုနက္ခ တွေကိုး..
ကျနော်ကတော့ လူတွေလိုပဲ ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်...
ကျောင်းကခွေးမတွေ မြိုင်ပေါ်ခါစ လူမမတွေသောက်တဲ့ တားဆေး တခြမ်းတိုက်လိုက်တာပဲ..သူတို့မိတ်လိုက်မှ တိုက်ရင် ဆေးမှာပါတဲ့ ဟိုမုန်းက အစွမ်းပြတော့..တော်သလင်းမကဘူး တန်ဆောင်မုန်းတောင်ရောက်ကုန်ကြတာ..ခွေးမတွေလဲ ယဲ့ယဲ့ပဲ ကျန်တယ်
Friday, 10 December 2010 at 14:42:00 GMT
Friday, 10 December 2010 at 14:51:00 GMT
ဖလားဖလား ကိုယ့်မှာ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး တို့ သူဂျီးမင်း ဒွတ်ခရောက်ပြီ.. ငါကိုယ်တော် ကယ်မှ ဆိုပြီး လေးငါးယောက်လောက် ၀ိုက်မလို့ လာကာမှ ခွေးမတွေ သားပေါက်နှုန်း များတာ သိသကိုး...
ဟိုတစ်ယောက်ပြောတာလဲ ဟုတ်သကိုး ဖဲဝိုင်း ဂျင်ဝိုင်း အရက်ဝိုင်းတွေမှာ ပုရိဿများတာကိုး... တက္ကသိုလ် ၊ တရားပွဲ တွေမှာ အမများတော့ နတ်ပြည်မှာ အမ များတာ မဆန်းပင်... ခက်တာက ကိုယ်နတ်ပြည်ရောက် ရင် တစ်ဖက်ငါးရာ မနိုင်ဝန်ထမ်းရမှာ... အော် ခန္ဓာရခြင်း ဒွတ်ခပေတည်... သူဂျီးမင်း ခင်ဗျား ယခု အခါတွင် ပလတ်စတစ် ပြဿနာ လွန်စွာကြီးထွားနေပါသော ကြောင့် လူ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းပြီး ဖြစ်သလို.. ခွေးပွားနှုန်း ထိန်းချုပ် ကန့်သတ်နိုင်ရန်..တိုးမောင်နှင့် ပေါက်ကျော်ကို ကမကထ လုပ်ပြီး တုံးဖလားရွာမှ စွန့်ပစ် ပလတ်စတစ်များကို ရွာသားများ မှ ခွေးထီးတစ်ကောင်၏ လိင်တံ ရင်းတွင် ပလတ်စတစ်များ လိုက် ပတ်ပေးကြရန်..ရိုသေစွာ အကြံပြုပါ၏ သူဂျီးမင်း ခင်ဗြား.. အကယ်၍ သူတို့ မလုပ်တတ်ပါက သူဂျီးမင်းကိုယ်တိုင် သွားရောက် လက်တွေ့ သရုပ်ပြပေးပါရန်...ဂွီ.
Friday, 10 December 2010 at 14:52:00 GMT
အေးလေ....တဂျီးများ မိန်းမများတာလားလို့ ဆေးနည်း
ပေးသွားတာတွေလည်း ကောင်းသား...။တဂျီး ကြိုးစား
Friday, 10 December 2010 at 16:07:00 GMT
အဖြူက တစ်မျိုး ၊ အနီက တစ်မျိုး ၊ အရောင်စုံများနှင့် ကိုယ့်မှာ ချာချာလည်နေပါတယ် ဆိုသလို မိန်းမတွေ များတော့လည်း အဲဒီလို အတွေးများနဲ့ ကြည်နူးတာနဲ့တင် စည်းစိမ် ဖြစ်ရတာပါပဲ အဟီး။
လောကရဲ့ သဘာဝကိုက သူ့ဖာသာသူ ဘက်မျှနေတယ် ၊ ဘက်မျှအောင် လုပ်ပေးထားတယ် ဆိုတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဒီတော့ ခွေးမတွေ မွေးပေမဲ့ သေကြေပျက်ဆီးမှုနှုန်း ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် သူ့ဖာသာ သဘာဝက စီရင်သွားပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အခု အတိုင်း ခွေးတွေ အတိုင်းအဆ မရှိ များပြားလာတယ် ဆိုပါကလည်း ဘာမှ မပူလင့်။ ခွေးကင် လုပ်ရောင်းနည်းကိုသာ သင်ကြားပြီး ထန်းရည်ဆိုင်များမှာ တင်ပေးလိုက်ပါ။ နောက်ဆို ခွေးများ ရှာမရအောင်ကို ဖြစ်သွားပါလ်ိမ့်မည်။
ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဘာမှ အများကြီး မသက်ဆိုင်ပေမဲ့ ကျနော့် အတွက် အရေးကြီးတဲ့ စာသားလေး နှစ်ကြောင်း ပါလာတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ် ကိုကိုမောင်ရေ။
နာမ်စားသုံးသော အကြောင်းအရာပါ။ ကျနော်လည်း ပို့စ်တစ်ခုမှာ ထည့်ပြီး ရေးဖူးပါတယ်။ နောက်ထပ် တင်မဲ့ ပို့စ် တစ်ခုမှာ ဒီနေရာလေးကို ထပ်ဆင့်ပွား ညွှန်းချင်ပါတယ်ဗျာ။
Friday, 10 December 2010 at 18:04:00 GMT
မိန်းမတောတွေချည်း သွားသွားလမ်းသလားနေပြီး မိန်းမပေါတယ် လုပ်နေတယ် ဒီသူကြီးတော့ ခက်တာပဲ။
သွားကြည့်ပါလား စစ်တပ်တို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့။
ပြိတ္တာဘုံ ငရဲဘုံမှာ ယောက်ျားပေါတယ်တဲ့ ရောက်ဖူးတာတော့မဟုတ်ဖူး ခန့်မှန်းကြည့်တာလေ။ နတ်ပြည် လူ့ပြည်မှာ မိန်းမပေါနေမှတော့ ကျန်တဲ့ယောက်ျားတွေ ပြိတ္တာဘုံ ငရဲဘုံ ရောက်နေရောပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။
အဖိုရှိပီး အမ-မရှိတာက ဇာတိပ္ဖိုလ် = ဇာတိတ်ဖို သီးလေ။ ဇာတိတ်မ-သီးမှ မရှိပဲ ဟာပဲ ဟာပဲ :P
နောက်ပီးတော့ ဆောင်းတဲ့ထီးဆိုလဲ "ထီး" တဲ့။ "မ" မဟုတ်ဖူး။
ဟောဟိုက တောင်ကုန်းပေါ်မှာ သစ်ပင်ထီးထီးကြီးတဲ့။ သစ်ပင်မမကြီးလို့ ပြောဘူးနော်။
နောက်ပီး ဖိုခနောက် ဆိုတာရှိတယ်။ မ-ခနောက်ဆိုတာရှိဘူး။
မြင်းတောင်မှ ဟီဟီဟီဟီ နဲ့ he တာ။ ရှီရှီရှီရှီ လို့ she ဘူး။
ပုဒ်မက ပုဒ်ထီးထက် တချောင်းသာပေမဲ့ ပုဒ်ထီး ၁၀ ခါချပြီးမှ ပုဒ်မ တခါလောက်ချရတာ။ (အဓိက နေရာမှာသာ ပုဒ်မသုံး၏၊ ပုဒ်ထီးလို ဘုန်းဘောလအော မသုံး)
သူဂျီးကိုကိုမောင်၏ နဘေးတွင် အောင်နက်၊ ဂုတ်ကျား၊ ၀ဲကျော်၊ နက်ကြုတ်၊ ပေတိုး၊ မဲလုံး၊ မိညို၊ မိနက်၊ မိဖြူ၊ မိကျား၊ မိကြွက် အစရှိသည့် ခွေးမဲ၊ ခွေးဖြူ၊ ခွေးညို၊ ခွေးကြား၊ ခွေးဝဲစားများ ၀ိုင်းပတ် ခြံရံလျက် ရှိလေတော့သတည်း။
ကြည့်ပါလား အထီးနဲ့ အမ ဘယ်လောက်ကွာတုန်း ... ဟွင်းးးးးးးး
Friday, 10 December 2010 at 22:37:00 GMT
သကြီး ရဲ့ မပြသာနာကို ရှင်းချင်သလို သာ ရှင်းတော့ သောင်ပြင်လွှတ်တဲ့ ခွေးမလေး ဘဝ မရောက်အောင်သာ အဖော်လေးဘာလေး ထဲ့လိုက်
Saturday, 11 December 2010 at 03:52:00 GMT
ဟား... ဘီလိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ... မသိ..
စာရယ် .. ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီး ရယ်သွားပါကြောင်း...း)
Saturday, 11 December 2010 at 04:02:00 GMT
အထီးကျန်ဆိုတာဘဲ ရှိတယ်.. အမကျန်ဆိုတာ မရှိဘူးလေ..
ကျောင်းတွေမှာ အမျိုးသမီးဦးရေက ပိုများနေတယ်ဆိုတော့
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ မိန်းမပညာတတ်တွေ ပိုများလာတယ် ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် သူကြီးး)
သူကြီးရဲ့ ခွေးပေါက်ကလေးတွေကို တစ်အိမ်တစ်ကောင်သာ ဝေပစ်လိုက်ပါ.
အိမ်ခြေနဲ့ ခွေး မကိုက်သေးရင် ပင်လည်ဘူးတစ်ဝိုက်ကိုပါ ဝေလိုက်ပါ .. ခွေးတစ်ကောင်အလကားရမဲ့ကိစ္စ လူတိုင်းက လက်ခံကြပါလိမ့်မယ်..း)
Saturday, 11 December 2010 at 06:46:00 GMT
ဟာ အစ်ကိုကတော့လုပ်ဘီ မိန်းမများရခြင်းဆိုတော့
ဘူး ဟီးးးးးးးးး နောက်ဆိုအလိုမနောက်ရဘူး :D :P
Saturday, 11 December 2010 at 14:26:00 GMT
အင်း... သူကြီးကိုကိုမောင်လဲ ထိုခေတ်ထိုအခါရောက်မှသာ လူပျိုဘ၀ ပျက်ရမည်ထင်၏။းဝ)))။ (ထိုခေတ်ကြီး မြန်မြန်ရောက်ပါစေ။ )
မဲက ကြိုတင်မဲ ပေးထားပြီးသားလေ...:)
Sunday, 12 December 2010 at 04:26:00 GMT
သူကြီးတို့ ကတော့ရေးလဲရေးတတ်တယ် ..
ရီလိုက်ရတာ ... ပို့ စ်ကိုရော ..ကွန်မန့် တွေရော
Sunday, 12 December 2010 at 05:16:00 GMT
Sunday, 12 December 2010 at 07:05:00 GMT
ထိုင်ဝမ်မှာတော့ ယောင်္ကျားများလာလို့တဲ့ သူကြီးရေ..။
Sunday, 12 December 2010 at 08:23:00 GMT
လာလည်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ စာအရေးအသား ကောင်းလှပါတယ်။ ပိုစ်တွေ ကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီး ရယ်သွားပါတယ်။ စိတ်ကို အပန်းပြေစေ ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါဘဲ။
Sunday, 12 December 2010 at 10:26:00 GMT
ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ ...
ဒါကြောင့်လည်း တုံးဖလား ရွာသူကြီး
Sunday, 12 December 2010 at 15:19:00 GMT
မမမ ရဲ့ ကွန်မန့်လေးကြိုက်တယ် ပို့စ်လေးလဲ ကောင်းပါတယ်...
Sunday, 12 December 2010 at 16:18:00 GMT
သူကြီး ပေါ်မလာ ပေါ်မလာနဲ့ ဘယ်ပျောက်နေလဲမှတ်ပါတယ် .. လက်စသတ်တော့ ရွာပြန်ပြီးခွေးသုတေသန လုပ်နေတာကိုးး)))
Monday, 13 December 2010 at 01:12:00 GMT
သူကြီး အာရှမှာတော့ အမျိုးသားဦးရေများနေတယ်လေ...နောက်ပိုင်းအိမ်ထောင်ပြုဖို့ လူဦးရေ မညီမျှမယ့် ကိစ္စတွေတောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလား....
မမမရဲ့ ကွန်မန့် လေးကြိူက်တယ်။
Monday, 13 December 2010 at 03:56:00 GMT
တယ်လုပ်နေပါလား သူကြီး . . . အရမ်းလည်းမလုပ်နဲ့ ဦးနော်. . . မစွန့်ပါနဲ့ သနားပါတယ် နော်
Tuesday, 14 December 2010 at 15:41:00 GMT
မိန်းမများတယ်သာ ပြောတယ် သူကြီးလည်း ခုထိမစွံပါလား
Tuesday, 14 December 2010 at 18:20:00 GMT
အမဓါတ်တွေ အားသာနေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ တို့ယောက်ျားတွေ တယ်လဲ မျက်နှာငယ်ပါပေါ့လား။းဝ))
အခုကြည့်လေ။ သူတို့ဘဲ စားသွားကြတယ်။ အရပ်ကတို့ရေ.. ကယ်ကြပါဦးဗျို့။ မျိုးနတ်နှင့် မမမ။ ထပ်တွေ့မယ်။ ဟာ ဟ။
ကွန်မင့်လာပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပျော်စရာ ရွှင်စရာ ဖြစ်ရပါတယ်။ အားလပ်ရင်လဲ ထပ်ပြီး လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Tuesday, 14 December 2010 at 22:49:00 GMT
သချီး အဲ သူဂျီး ဘာမှအားမငယ်နဲ့ နောက်နှစ်တွေကြာရင် အနော်တို့ ဘယ်ညာတစ်ယောက်စီ အရှေ့အနောက် တစ်ယောက်စီ တွဲလို့ရတော့မယ်ဗျာ့ နော့် စိတ်မပျက်နဲ့ အားမငယ်နဲ့ တောင့်ထား ဘသား ကြားရို့.....
Saturday, 18 December 2010 at 06:05:00 GMT